မကြာခင် အသုံးပြုသူ သန်း ၁၀၀၀ ပြည့်တော့မယ့် Google Drive
26 Jul 2018 . 11:37 AM
Google Drive ကို အသုံးပြုဖူးတဲ့သူတွေရှိကြပါသလား? Google ရဲ့ ၆ နှစ်သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ Google Drive Cloud File Storage ဟာ အခုဆိုရင် တကမ္ဘာလုံးမှာ အသုံးပြုသူ သန်း ၁၀၀၀ ပြည့်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုကြေညာချက်ဟာ San Franciso မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Google Cloud Next Conference မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Google ကနေ ဘယ်အချိန်မှာ အသုံးပြုသူ သန်း ၁၀၀၀ ပြည့်မလဲဆိုတာကို အတိအကျပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပေမယ့် ယခုရက်သတ္တပတ်နောက်ပိုင်းမှာ ပြည့်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့သာ Google Drive ကို အသုံးပြုသူ သန်း ၁၀၀၀ (၁ ဘီလီယံ) ပြည့်သွားမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒါက Google ရဲ့ Gmail ၊ Chrome နဲ့ Google Maps လို Product တွေပြီးရင် ၈ ခုမြောက် ၁ ဘီလီယံပြည့်သွားတဲ့ Product တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက Android ကလည်း အသုံးပြုသူ ၂ ဘီလီယံပြည့်သွားခဲ့ပြီး လက်ရှိတကမ္ဘာလုံးမှာ အကြီးမားဆုံးသော Mobile Operating System တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
Google ဟာ Drive ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ထဲက စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင် Trillion ပေါင်းများစွာသော File တွေကို Store ပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Google I/O Conference မှာ ပြောကြားချက်အရဆိုရင် Drive ကို နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သူအရေအတွက်ဟာ သန်း ၈၀၀ ကျော်အထိ ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Google ဟာ မကြာသေးမီကလည်း Business ပိုင်းဆိုင်ရာ Feature တွေဖြစ်တဲ့ Team Drives လို Feature အပြင် File Stream လိုမျိုး အသုံးပြုသူတွေကြားထဲမှာ Storage Space ကို Maximize ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Feature တွေကိုပါ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Google ဟာ Drive ကို အသုံးပြုသူအများဆုံး Online Storage တစ်ခုအဖြစ်အသက်သွင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
Google Drive ကို အသုံးပွုဖူးတဲ့သူတှရှေိကွပါသလား? Google ရဲ့ ၆ နှဈသကျတမျးရှိပွီဖွဈတဲ့ Google Drive Cloud File Storage ဟာ အခုဆိုရငျ တကမ်ဘာလုံးမှာ အသုံးပွုသူ သနျး ၁၀၀၀ ပွညျ့တော့မှာပဲဖွဈပါတယျ။
အခုကွညောခကျြဟာ San Franciso မှာပွုလုပျခဲ့တဲ့ Google Cloud Next Conference မှာ ထုတျပွနျခဲ့တာဖွဈပွီးတော့ Google ကနေ ဘယျအခြိနျမှာ အသုံးပွုသူ သနျး ၁၀၀၀ ပွညျ့မလဲဆိုတာကို အတိအကပြွောကွားခဲ့ခွငျးမရှိပမေယျ့ ယခုရကျသတ်တပတျနောကျပိုငျးမှာ ပွညျ့တော့မှာဖွဈတယျလို့ ပွောကွားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
တကယျလို့သာ Google Drive ကို အသုံးပွုသူ သနျး ၁၀၀၀ (၁ ဘီလီယံ) ပွညျ့သှားမယျဆိုရငျ အဲ့ဒါက Google ရဲ့ Gmail ၊ Chrome နဲ့ Google Maps လို Product တှပွေီးရငျ ၈ ခုမွောကျ ၁ ဘီလီယံပွညျ့သှားတဲ့ Product တဈခုဖွဈလာမှာပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈတုနျးက Android ကလညျး အသုံးပွုသူ ၂ ဘီလီယံပွညျ့သှားခဲ့ပွီး လကျရှိတကမ်ဘာလုံးမှာ အကွီးမားဆုံးသော Mobile Operating System တဈခုဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
Google ဟာ Drive ကို ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှဈထဲက စတငျခဲ့တာဖွဈပွီး အခုဆိုရငျ Trillion ပေါငျးမြားစှာသော File တှကေို Store ပွုလုပျပေးနတောဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈတုနျးက ပွုလုပျခဲ့တဲ့ Google I/O Conference မှာ ပွောကွားခကျြအရဆိုရငျ Drive ကို နစေ့ဉျအသုံးပွုနတေဲ့သူအရအေတှကျဟာ သနျး ၈၀၀ ကြျောအထိ ရှိနပွေီဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
Google ဟာ မကွာသေးမီကလညျး Business ပိုငျးဆိုငျရာ Feature တှဖွေဈတဲ့ Team Drives လို Feature အပွငျ File Stream လိုမြိုး အသုံးပွုသူတှကွေားထဲမှာ Storage Space ကို Maximize ပွုလုပျနိုငျတဲ့ Feature တှကေိုပါ မိတျဆကျပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ Google ဟာ Drive ကို အသုံးပွုသူအမြားဆုံး Online Storage တဈခုအဖွဈအသကျသှငျးနတေယျဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး။